Nagarik News - No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Nepal, राष्ट्रिय दैनिक - विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने?
शनिबार, ०७ भदौ २०७६, १० : २३
शनिबार, १६ भदौ २०७५, ०८ : १४ | मिलन पाण्डे | @Milanleads
शिक्षकले विद्यार्थीलाई पढाउने होइन, विद्यार्थीलाई ‘सिक्न’ मद्दत गर्ने हो । सिकाइ सधैँ ‘ट्राइल एन्ड इरर’ प्रक्रिया हो। हामी यो कुरा भुलेर विद्यार्थीलाई केही आउँदैन, शिक्षकले नै सबै सिकाउने हो भन्ने भ्रमबाट शिक्षा प्रणालीलाई लाँदै छौँ । झन् तर्साएर, डर देखाएर जर्बजस्ती पढ्न बाध्य बनाउदै छौं । तसर्थ, अबको शिक्षा प्रणाली सुधारको बहस के पढाउने मात्र होइन, कसरी पढाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन जरुरी छ।
हाम्रो शिक्षा प्रणालीले एउटा ठुलो गल्ती गर्दै छ । हामी विद्यार्थीलाई गल्ती गर्न रोक्दै छौँ । अरे बाबा ! विद्यार्थीले कक्षा कोठामा वा सिक्दा गल्ती गर्दैन भने कसरी सिक्छ त ? कक्षा कोठा भनेको त फुटबलको प्राक्टिस म्याच जस्तै हो । कडा मेहनत, गल्ती, गल्ती सुधार्न सिक्नु, गल्ती सुधार्नु, सामूहिक भाव, अनि फाइनल खेलको तयारी । यहाँ त हामी प्रत्येक कक्षालाई फाइनल बनाउन खोज्दै छौं । अनि, विद्यार्थीलाई सिक्नबाट रोक्दै छौं।
हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा ३ वटा आधारभूत व्यावहारिकतामा सुधार आवश्यक छ।
१) पढाउन बन्द गरौँ
हामी किन हाम्रो सबैभन्दा ऊर्जावान समय रटान मार्दै बर्बाद गर्दै छौँ ? पढ्नु भनेको घोक्नु हो भन्ने बुझाई स्थापित भैसकेको छ । कण्ठ हुनुप¥यो, बुझ्न आवश्यक छैन । हाम्रो रट्ने बानी परिसकेकाले आफुले सोच्न अनि रचनात्मक हुनै विर्सिसकेका छौं । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हामीलाई झन् भुत्ते बनाउँदै छ । हामीले वर्षौँ पढेका छौँ, तर एउटा टायर परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, फ्युज चेक गर्न सक्दैनौँ, बैकको व्याज कति भयो निकाल्न सक्दैनौँ भने हामीले जिन्दगीमा पढेको २० औं वर्ष के काम लाग्यो र?
केही समय यता हाम्रो शिक्षामा केही परिवर्तन आएको छ। किताबहरू इ–बुकमा परिणत भएका छन्। व्हाइट बोर्ड युटुब च्यानलमा परिणत भएको छ । अनलाइन कोर्सहरु सुरु भएका छन् । मेरो डर, हामीले माध्यम नयाँ खोज्दै छौँ तर विधि अनि तरिकामा परिवर्तन ल्याउने बहस चलाउन सकेका छैनौँ । समस्या विधिमै छ।
५ वर्षको बच्चाले आफैं बोल्न सिक्छ, तर जब ऊ स्कूल जान्छ र शिक्षित शिक्षकबाट पढ्न थाल्छ । उसको भाषा झन् कम्जोर बन्दै जान्छ, किन ? किनकि उसले सिक्न छाड्छ, पढ्न (रट्न) सुरु गर्छ । हालको शिक्षाले प्राकृतिक सिक्ने क्षमतालाई नै कम गरिदिएको छ । एउटा बच्चा हिँड्नु अघि सयौँ चोटि लड्छ, फेरि उठ्छ, फेरि लड्छ । सिकाइको यो अनुपम नमुना हो । बच्चालाई कसैले यसरी हिँड भनेर सिकाउन त सिकाउँदैन नि । सिकाइ प्रक्रिया हो।
शिक्षा प्रणालीको सुधारको पहिलो सर्त नै विद्यार्थीलाई पढाउन बन्द गरिनुपर्छ । सिक्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ । शिक्षकको भूमिका विद्यार्थीका निम्ति त्यो वातावरण बनाइदिनु हो । सुझाव दिनु हो । समाधानतिर उन्मुख हुन प्रेरित गर्नु हो । चम्चामै राखेर पिलाउनु होइन । जब विद्यार्थीलाई कुनै परिस्थितिमा राखिन्छ, काम गर्न दिइन्छ, गल्ती गर्न दिइन्छ, सुझाव दिइन्छ, फेरि सुधार्न दिइन्छ तब न सिकिन्छ । यहाँ त विद्यार्थीहरुले सुनोस् नसुनोस, जबर्जस्ती पाठ सकाउन अनि ‘स्लाइडहरु’ सकाउनुलाई पढाइ भनिँदै छ । के यसरी पढाएर विद्यार्थीहरुले रचनात्मक हुन सक्छन् ? यसरी पढेको कुरालाई जीवन उपयोगी बनाउन सक्छन्?
२) ‘कथा’ले कनेक्ट गरौँ
आजको शिक्षाको सबैभन्दा खराब पक्ष, अहिले हाम्रो शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई संलग्न नै गराउन सकेको छैन । हाम्रा कक्षाहरू अल्छीलाग्दो बन्दै छन् । जेलजस्तै सजाय काट्ने स्थान बन्दै छन् । तसर्थ, विद्यार्थीलाई विषयमा संलग्न गराउन जरुरी छ । जसका निम्ति विषयलाई कथासंग जोड्ने विधि उपयुक्त हुन्छ । कथाले कक्षालाई रमाइलो बनाउँछ । चासो जगाउँछ । विषयलाई जीवनसँग जोड्न सक्यो भने विद्यार्थीको विषयमा रुचि बढ्छ।
‘पाइथागोरस साध्य’ हामीले रटेर पढ्यौँ तर यो साध्य, हामीलाई यात्रामा कुन बाटो छोटो पर्छ भन्ने देखि, घरको बाहिर प्रयोग हुने भ-याङको लम्बाई कति चाहिन्छ भन्ने सम्मको लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन सकेका छैनौँ । जिन्दगीको पहिलो अक्षर ‘कपुरी क’ को अर्थ पनि कपुर (बास्ना आउने बिरुवा) जस्तै भन्ने रहेछ भन्ने मैले धेरै पछि मात्र बुझेको हुँ।
धेरै विद्यार्थीको लागि ‘क्यालकुलस’ निकै गाह्रो विषय हो । मलाई पनि यो विषय गाह्रो लाग्थ्यो किनकि, मलाई ‘क्यालकुलस’ पढाउने गुरुले यो विषय मेरो जीवनमा कहाँ उपयोगी हुन्छ भनेर भन्नुभएन । आउनुभयो, सूत्र लेखाउनुभयो, प्रश्न नं. १, १७, २१, २७ गरिदिनुभयो । बाँकी मैले साथीहरू अनि गाइडबाट सारेर पढेँ । के काम मेरो पढाइको ? जब परीक्षा सकियो मेरो घोकाइ पनि सकियो । यसरी पढेको पाठले मलाई जिन्दगीमा सहयोग गर्न सक्दैन । यदि मलाई मेरो गुरुले ‘क्यालकुलस’ ले मेरो जिन्दगीमा किन उपयोगी छ भन्ने बताउनुभएको भए मलाई सिक्न रुचि बढी लाग्थ्यो कि ? वा, मलाई ‘क्यालकुलस’ लिबनिज र आइज्याक न्युटन मध्ये कसले पत्ता लगाएको भनेर गणित इतिहासमा रहेको विवादको कथाबारे सरले भन्नुभएको भए पो मेरो ध्यान जान्थ्यो कि?
शिक्षकमा हुन पर्ने तेस्रो गुण भनेको सरल तरिकाले बुझाउन सक्ने क्षमता हो । यदि शिक्षकले कुनै पनि विषयलाई सरल ढङ्गबाट बुझाउन सक्दैन भने, त्यसको एउटै मात्र कारण हो शिक्षक आफैँले बुझेको हुँदैन ।
शिक्षा जीवनसँग जोडिनुपर्छ । शिक्षा रमाइलो हुन जरुरी छ । पढाइ बोझ भयो भने, यो फलदायी हुन सक्दैन । तसर्थ, हामीले विद्यार्थीलाई कक्षामा संलग्न गराउन जरुरी छ । संलग्नताले विषयमा ध्यान केन्द्रित गराउँछ । तसर्थ, मेरो भोगाइ अनि गराइले भन्छ, कथा नै एउटा यस्तो साधन हो जसले विद्यार्थीलाई विषयसँग जोड्न सक्छ । प्रत्येक विषयको कथा हुन्छ । प्रत्येक समीकरणको कथा हुन्छ । खाली शिक्षकले खोज्न सक्नुप¥यो । जोड्न सक्नुप-यो । तसर्थ, विद्यार्थीलाई विषयसँग जोडेर दिने उदाहरण, कथा, जोक, खेल, घटनाले विद्यार्थीलाई विषयसँग बाँध्न सक्छ अनि विद्यार्थीलाई पढाइमा रुचि बढाउँछ।
३) विद्यार्थी–शिक्षक सम्बन्ध
सफल शिक्षकले २ वटा कुरालाई प्रेम गर्न सक्नुपर्छ । पहिलो, आफूले पढाउने विषयलाई अनि दोस्रो विद्यार्थीलाई । शिक्षकले कक्षाका प्रत्येक विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन जरुरी छ । प्रत्येक विद्यार्थीलाई ‘तिमी महत्वपूर्ण छौ’ भनेर महसुस गराउन जरुरी छ । शिक्षकले म तिम्रो ख्याल राख्छु भन्ने भाव सञ्चार गर्न जरुरी छ । विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गर्ने, तिमी सक्छौ भनेर हौस्याउने, उनीहरूसँग उनीहरूको सोखबारे जानकारी लिने, उनीहरूको नाम सम्झने, उनीहरूको विचार, सोच बुझ्ने, सपना सुन्ने, जन्मदिन मनाउने यी सब कुराले शिक्षक अनि विद्यार्थीबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ । शिक्षकले कक्षाको अन्तिम बेन्चमा बसेका विद्यार्थीलाई अगाडीबाट गएर ‘पढाएको बुझ्दै छौं ? नबुझे सोध है’ भनेर सोध्नाले मात्र पनि त्यो विद्यार्थीको त्यो विषयमा रुची बढ्छ । तर शिक्षक अगाडिको कुर्सीबाट हल्लिदैनन् । यी साना कुरा होइनन्, यी कुराले असफल कहलिएको विद्यार्थीलाई विषयमा रुचि बढाउन मद्दत गर्छ।
शिक्षकमा तीन ओटा गुण हुन जरुरी छ । पहिलो, शिक्षक कक्षामा स्वाभाविक (नेचुरल) हुन जरुरी छ । जब शिक्षक बनावटी देखिन्छन् तब विद्यार्थीसंग ‘कनेक्सन’ बनाउन सक्दैनन्।
दोस्रो कुरा, सफल शिक्षकले कहिले पनि केन्द्रमा आफूलाई राख्दैनन् । सधैँ केन्द्रमा विद्यार्थीलाई राख्ने गर्छन् । उनीहरूले शिक्षाको पहिलो केन्द्र विद्यार्थी भन्ने बुझेका हुन्छन् । पढाउने भनेको पेन ड्राइभबाट डाउनलोड गरे जस्तो होइन–शिक्षकले भन्यो अनि विद्यार्थीले बुझ्ने । एउटा कटु सत्य के हो भने, विद्यार्थीले शिक्षक विना पनि सिक्न सक्छ तर शिक्षक विद्यार्थी विना अधुरो हुन्छ । ८ महिनाको बच्चालाई हामीले हिँड्न सिकाएको होइन । एक वर्षको बच्चालाई बोल्न शिक्षक चाहिएको होइन । न त कुनै बच्चालाई संवाद गर्न शिक्षकले सिकाएको हो । सिकाइ प्राकृतिक हो, शिक्षक सहयोगी हो।
शिक्षकमा हुन पर्ने तेस्रो गुण भनेको सरल तरिकाले बुझाउन सक्ने क्षमता हो । यदि शिक्षकले कुनै पनि विषयलाई सरल ढङ्गबाट बुझाउन सक्दैन भने, त्यसको एउटै मात्र कारण हो शिक्षक आफैँले बुझेको हुँदैन । चर्चित भौतिक शास्त्री रिचार्ड फेनम्यानलाई एकदिन एकजना विद्यार्थीले भौतिक शास्त्रकै एउटा विषय सोधेछन्, उनले उत्तर दिँदा पनि विद्यार्थीले नबुझेपछि उनले यसलाई साधारण बनाउन मलाई २–३ दिन दिनुहोस् भनेछन् । उनले २–३ पछि उक्त विद्यार्थीलाई भनेछन्, मलाई लाग्छ मैले यसको ‘कन्सेप्ट’ राम्ररी बुझेको रहेनछु किनकि मैले यसलाई सजिलो भाषामा बुझाउन सकिनँ । रिचार्डले भौतिक शास्त्रको बारेमा बुझेको छैन भनेर स्विकारेका छन् । हामी के गर्दै छौँ ? हामी सबै बुझे झैँ विधार्थीलाई झुक्याउँदैछौँ । कुनै पनि शिक्षकले कुनै पनि विषय ५ कक्षाको विद्यार्थीलाई बुझाउन सक्दैन भने एउटै कारण हो कि शिक्षक आफैँले बुझेको हुँदैन।
नयाँ शिक्षाको कल्पना
घरमा बुवा–आमाको कुरा ५ मिनेट सुन्न नसक्ने हामीहरुले दिनको ८ घण्टाको ‘लेक्चर’ सुन्दा कति पाक्छौँ होला ? त्यसैले, एउटा शिक्षक आएर पढाउने अनि विद्यार्थीले चुपचाप सुन्नुपर्ने विधिलाई अब बन्द गर्न जरुरी छ । अब विद्यार्थी आफैँले सिक्न सक्ने माहौल बनाउन जरुरी छ । अहिले धेरै विकसित देशमा सुरु हुँदै गरेको यो विधि हाम्रो लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ । शिक्षकले कक्षालाई ४ देखि ८ विद्यार्थीको एउटा ग्रुप बनाएर कक्षालाई भाग लगाउने । अनि, प्रत्येक ग्रुपलाई त्यस दिनको पाठ अध्ययन गर्न दिने । प्रत्येक ग्रुपले उक्त विषयमा अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने । ग्रुपले शिक्षकलाई नबुझेको कुरा सोध्नेछन् अनि आफ्नो बुझाइ कक्षामा प्रस्तुत गर्नेछन् । अनि उनीहरूको प्रस्तुतिमा अरू विद्यार्थीले प्रश्न गर्ने अनि छलफल गर्नेछन् । यसरी विद्यार्थीलाई सिक्न, आफूले बुझेको कुरा प्रस्तुत गर्न सिकाउन सक्यौँ भने उनीहरूको विश्लेषणात्मक क्षमता पनि बढ्नेछ । यसमा शिक्षकले सहयोगीको भूमिका खेलेर माहोल बनाउने काम गर्न जरुरी छ । विद्यार्थीलाई नै विषयमा डुब्न नदिने हो भने नयाँ आइडिया कसरी आउन सक्छ?
अन्त्यमा, केही समय यता हाम्रो शिक्षामा केही परिवर्तन आएको छ । किताबहरू इ–बुकमा परिणत भएका छन् । व्हाइट बोर्ड युटुब च्यानलमा परिणत भएको छ । अनलाइन कोर्सहरु सुरु भएका छन् । मेरो डर, हामीले माध्यम नयाँ खोज्दै छौँ तर विधि अनि तरिकामा परिवर्तन ल्याउने बहस चलाउन सकेका छैनौँ । समस्या विधिमै छ । सुधार विधिमै हुन जरुरी छ। शिक्षा अर्थपूर्ण, उदेश्यमूलक अनि उपयोगी हुन जरुरी छ।
(विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पाण्डे अध्यापनमा संलग्न छन्)
विद्यार्थीको कपाल काट्न शिक्षकलाई तालिम
रित्तिँदै रोल्पाका विद्यालय
बालकथा : निलिमाको नयाँ स्कुल
विद्यार्थी पिट्ने शिक्षकलाई कारबाही माग
रेडपाण्डा संरक्षणमा जुटे शिक्षक, विद्यार्थी
शिक्षक भन्छन्, विद्यार्थीले पढ्नै मन लाउँदैनन्
विद्यार्थीको लागि इन्टर्नशिप सम्झौता
विद्यालयमा छात्राको सँख्या बढाउन अभिभावकलाई तेल उपहार
छात्रवृत्तिका विद्यार्थी पढाउन आलटाल
भीमदत्तले विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति दिने
भक्तपुरका विद्यार्थीले बनाए ब्याट्रीबिना बल्ने बत्ती
विपन्न विद्यार्थीलाई झोला
विद्यार्थीको रोजाइमा चितवन
‘कानुन’मा विद्यार्थी आकर्षण बढ्दो
विद्यार्थीलाई क्यान्सर बारे चेतना
‘म्याथ आर्ट’ले बनायो सजिलो गणित
पूर्व–प्रावि शिक्षकको तलब बढाउन माग
विद्यालय फिको सट्टामा खाली बोतल
‘कापीकिताब उडायो, कसरी स्कुल जाने
एनओसी कसले पाउँछन् कसले पाउँदैनन् ?
अभावमा चलेको आवसीय विद्यालय
नगरपालिकामा झडप, एक दर्जन विद्यार्थी घाइते
सरकारी स्कुलका विद्यार्थी बसमा सरर
सिँजा बहुमुखी क्याम्पस : भर्ना लिइन्छ, पढाइ हुन्न
एसियन पब्लिक सिर्जनशील विद्यार्थीहरू
खुला आकासमुनि हुरीपीडित विद्यार्थी
कपालमा कैंची चलाउँदै शिक्षक
रेडियन्टका गौरवशाली विद्यार्थी
नेकपाको जिल्ला कमिटीमा स्थायी शिक्षकको ताँती
काफल बेचेर पढाई खर्च
विद्यार्थी रोक्न घर दैलो अभियान
विद्यार्थीलाई बाँडियो जंगफुड
नौ महिनापछि बेपत्ता विद्यार्थीको शव भेटियो
४ विद्यालयमा मात्र चारजना विद्यार्थी
लडेर विद्यार्थी घाइते
अपांगता भएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा
स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी शिक्षक नियुक्ती गरिँदा समस्या
पढाइ सीप विकासका लागि शिक्षक तालिम
विद्यालय बन्द, शिक्षक–विद्यार्थी लेकमा
वेपत्ता भएको पाँच दिनपछि शिक्षकको शव फेला
तीन विद्यालय शिक्षकविहीन
सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन ‘इन्ट्रान्स’
स्थानीय निकायसँग समन्वयनै नगरि शिक्षक नियुक्तिपत्र बाड्दा ब्यवस्थापनमै चुनौती
नगरपालिकाले शिक्षक नियुक्ति बदर गर्ने
नयाँ शिक्षकलाई हाजिर हुन नगरपालिकाको अवरोध
मोबाइल टावरको आवश्यक सामाग्रीसहित डोल्पा पुगे विद्यार्थी
३ सय बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल
डोल्पाका ११ सय बालबालिका पाठयपुस्तकबाट बञ्चित
परीक्षामा पहिलाे बनाइदिन्छु भन्दै छात्रामाथि याैन दुर्व्यवहार
सामुदायिकमा विद्यार्थी आकर्षण गर्न इ–लर्निङ
१४ विद्यार्थी एसइई दिन अयोग्य
एसइई परीक्षाको तयारी पूरा, ४ लाख ७५ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
फेवातालमा मृत भेटिए विद्यार्थी
माछापुच्छ्रे प्रदर्शनीमा सिर्जनशीलता
विद्यार्थी बर्बराउने समस्याले दुई महिनादेखि पढाइ अवरुद्ध
शैक्षिक ऋण दिँदै भक्तपुर नगरपालिका
विद्यालयमा खुसी : हरण कि निर्माण ?
राहत शिक्षकको आन्दोलनमा पानीको फोहोरा, चार पक्राउ
नगर र पुस्तक वितरक बीचको विवादले बालबालिकाले किताब पाएनन्
ट्युसन पढाउने बहानामा कोठामा लगेर बलात्कार
अस्पताल बनाउन पाँच लाख सहयाेग
एनसिसीप्रति विद्यार्थीको आकर्षण
एमबीबीएसमा तोकिएभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरेको खुलासा
खाजा खर्चबाट मुसहर बालबालिकालाई सहयोग
अस्ट्रेलियामा अध्ययन अल्झन
त्रिविका डिनलाई नेकपानिकट विद्यार्थीको कालोमोसो
विकल्प बन्दै न्युजिल्यान्डको पढाइ
दृष्टिविहीन संघलाई जापानी दूतावासको सहयोग
विद्यार्थीकाे सरसफाइ अभियान
गण्डकी कलेजमा शुल्क विवाद : विद्यार्थीले लगाए ओपिडीमा ताला
विद्यार्थी पक्राउ गरिएकोप्रति अमेरिकासँग भारत आक्रोशित
मुख्यमन्त्रीको गाडीमा ‘माफिया सरकार’ लेखेको आरोपमा १३ विद्यार्थी पक्राउ
स्वागत गर्न लाईनमा बसेकी छात्राको मृत्युबाट के सिक्यौँ ?
सहयोगमा जुट्दै पराजित नेता
यसपटक पनि समयमै नपाउने भए डोल्पाका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक
गरिब जेहेनदार विद्यार्थीलाई पाँच लाख शैक्षिक ऋण दिने
हजुरआमाको भत्ताको भरमा नातिनातिना
विद्यार्थीद्वारा खेल सामग्री हस्तान्तरण
पाठ्यक्रम बाहिरबाट प्रश्न सोधिएको भन्दै विद्यार्थीद्वारा तोडफोड
विद्यालयको नाम र विद्यार्थी परिचयपत्र अब नेपालीमाः महानगर
स्याउ फल्न छाडेपछि सिकाइ केन्द्र बन्दै बागवानी
त्रिविमा नयाँ विषय थपिँदै, पुराना सुक्दै
गाउँपालिकाबाट ‘ट्युसन फी’ पाउँदा विद्यार्थी खुसी
पुस्तक वितरण गरेर जन्मदिन मनाउँछन् विद्यार्थी
‘करारलाई स्थायी गर्नु विश्वविद्यालयको अहितमा’
शिक्षकको कुटाईबाट बिद्यार्थीको मृत्यु भएको आरोप, परिवार शोकमा
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुखविरुद्ध प्रदर्शन, घण्टाघर तनावग्रस्त
विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना (अपडेट) : मृत्यु हुनेको संख्या २३ पुग्यो, ९ को सनाखत
कक्षाकोठामै सांसद आउँदा विद्यार्थी दंग
संगठनको आडमा मेडिकल कलेजको ठगी
विद्यार्थीले सांसदलाई सुनाए विद्यालयका समस्या
गृहकार्य नगरेको निहुँमा विद्यार्थीलाई यातना
सन्दीप लामिछाने बने जेभियरको विद्यार्थी
आन्दोलन र बेथितिको अखडा
भर्‍याङबाटबाट लडेर शिक्षकको मृत्यु
टहरोमा भविष्य खोज्दै विद्यार्थी
एक दिन विद्यालय नआए १० रुपैयाँ
प्राविधिक शिक्षाको लहर
उदयपुरमा तीन सय विषयगत शिक्षकको दरबन्दी रिक्त
जीवन बुझेपछिको ‘उठान’
जब विद्यार्थी बने चराचुरुङ्गी
स्थायी गर्न माग गर्दै राहत शिक्षकको प्रदर्शन
शिक्षक महासङ्घद्वारा आन्दोलन घोषणा
प्रमाणपत्र कीर्ते गर्ने पक्राउ
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा उत्कृष्ट विद्यार्थी विभूषित
घाँसदाउरा गर्ने हात कम्प्युटरमा
पूजा खत्री नबनाऊ अरुलाई
कक्षा १ मा पढ्दै ७५ वर्षीय हजुर अामा !
बीचमै पढाइ छाड्ने विद्यार्थी बढे
जीवविज्ञानका विद्यार्थीले गणित पढ्न पाउने
७५ मा संन्यासी कि विद्यार्थी?
जुस पिउँदा १५ विद्यार्थी विरामी, दुई पक्राउ
महिला इन्जिनियर घट्दो
डान्स क्याम्पमा रमाउँदै विद्यार्थी
डि–इ विद्यार्थी कहाँ जाने ?
विद्यार्थी संख्याको आधारमा कर
टहरामा पठनपाठन, त्रासमा विद्यार्थी
हामी अझै सवल छौ : सेवा निबृत शिक्षक
तीन जना विद्यार्थी २ दिनदेखि सम्पर्क बिहीन
लागूऔषध र मदिरा रोक्न विद्यार्थी र प्रहरी सक्रिय
शिक्षक टिकाउन आलुखेती
कोरियन भाषा परीक्षा : ४७ नक्कली विद्यार्थी पक्राउ
धादिङमा विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना, ५ घाइते
विद्यार्थी मृत अवस्थामा फेला
वर्षाले मन्थली डुबानमा, रणजोर खोलाले ७ विद्यार्थी बगायो
विद्यार्थी भर्ना : टिकाउ र बिकाउ
विद्यार्थी नपाएपछि सरकारी विद्यालय बन्द
लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालयबाट पहिलोपटक विद्यार्थी दीक्षित हुँदै
टेलिकमले ल्यायो ह्याप्पी सोशल मिडिया प्याक र विद्यार्थी अफर
विद्यार्थी भर्नाका भ्रम
सुर्खेत शिक्षा र सरस्वती विजयी
शिक्षा : मानव विकासको आधार
विद्यार्थी संगठनद्वारा अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड्ताल घोषणा
आधा किताब पढेर एसइई दिँदै रोल्पाका विद्यार्थी
विद्यार्थी र बिरामी समस्यामा
पोखरा विश्वविद्यालयको १५ औं दीक्षान्त समारोहमा विद्यार्थी दीक्षित
ब्लड क्यान्सर पीडित साथीलाई बचाउन चिया बेच्दै विद्यार्थी
किन घट्दैछन् सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी ?
एक बिद्यार्थीलाई पाँच शिक्षक ! (फोटो फिचरसहित)
सोलुखुम्बुमा ४ सय विद्यार्थी बिरामी, स्वाइन फ्लूको आशंका
अंग्रेजी माध्यम र खाजाले विद्यार्थी बढे
चिसो बढेपछि विद्यालय बन्द गर्न शिक्षा कार्यालयको निर्देशन
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन : निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ
विद्यार्थी छैनन् इतिहास विभागमा
वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाउनेका सन्तानलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा
निर्वाचन बिरोधी गतिविधिको आरोपमा शिक्षक पक्राउ
विद्यार्थी बाहिरिने क्रम बीस प्रतिशतले बढ्यो
सिरहामा मतदाता शिक्षा शुरु
उम्मेदवारसमक्ष लोपोन्मुख लेप्चा समुदायको चाहना : भत्ता होइन, शिक्षा र प्रोेत्साहन
मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नहुँदा मतदाता अलमलमा
कमाउँदै पढ्छन् विद्यार्थी
मौका परीक्षा नहुँदा विद्यार्थी शोधपत्र लेख्न वञ्चित
प्राथमिक तहमा मातृभाषा शिक्षा
प्रतिबद्धताविपरीतको शिक्षा ऐन
दाइजो ? हैन, शिक्षा
विद्यार्थी हत्याको विरोधमा प्रदर्शन
नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनको अध्यक्षमा गौतम निर्वाचित
दुर्घटना घटाउन 'ट्राफिक शिक्षक' कार्यक्रम
शिक्षक नियुक्तिको मुल्यांकन फाराम लिएर व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष फरार
कम्प्युटरमा गेम खेलेर बस्छन् विद्यार्थी
गृहकार्य समूह गठनले विद्यार्थी उत्साहित
कठै शिक्षक आन्दोलन
घुस लिँदालिँदै शिक्षा कार्यालय रौतहटका सबओभरसियर पक्राउ
शिक्षा ऐनमै खेल : पुरानाले कमाउन नयाँलाई छेकबार
अनशनको दसौं दिन : चिकित्सा शिक्षा ऐनमा झन्झन् गाँठो
कर्मचारी अपहरण गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ
शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार रौनियार र पौडेललाई
तनहुँका एक विद्यार्थी दुई दिनदेखि बेपत्ता
नागरिक शिक्षा र जागरुकता
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक
सडकपेटीमा तरकारी बेच्छन् ९८.६ प्रतिशत ल्याएका विद्यार्थी
चट्याङ लागेर दुई विद्यार्थी गम्भीर
अबैध सम्वन्धपछि महिला वेपत्ता पारेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ
मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाइँदै
मतदाता शिक्षा सहरमा केन्द्रित
एक हप्तादेखि शिक्षक बेपत्ता
दलको प्राथमिकता : प्राविधिक, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा
प्रयाेगात्मक शिक्षाः पुस्तकसँगै कुटोकोदालो
महिला शिक्षक बढे
सुधारिँदै सरकारी स्कुल, विद्यार्थी चाप थामिनसक्नु
विद्यार्थी राजनीतिको औचित्य
चुनाव प्रचारमा शिक्षक र वालवालिका प्रयोग नगर्ने प्रतिवद्धता
सङ्घीयतासहितको शिक्षा नियमावली आउँछ : प्रधानमन्त्री
हिम पहिरोमा परी ८ विद्यार्थी बेपत्ता
अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट शिक्षक गम्भीर
एसइईमा खोटाङका ३८३ विद्यार्थी अनुपस्थित
विद्यार्थी जोगाउने चुनौती
खोटाङमा १०५ विद्यार्थी एसइई दिन अयोग्य
विद्यार्थी निर्वाचन र अराजकता
विद्यार्थी संगठनबीच झडप, १२ जना घाईते
स्ववियू निर्वाचन अधिकृतलाई कालोमोसो, विद्यार्थी संगठनबीच झडप
रत्नराज्य र शंकरदेवमा विद्यार्थी संगठनबीच झडप
नागरिक शिक्षा सिकाउने कला
डोजरले विद्यार्थी किचेपछि विराटनगरमा तनाव, प्रहरीद्वारा हवाइ फायर
किर्ते गरेर शिक्षक पदपूर्ती गरेको आरोपमा प्रधानाध्यापक पक्राउ
चुरे बचाउन जागे विद्यार्थी र वातावरणविद्
विद्यार्थी हितकारी परिषद्
सार्वजनिक सवारीले विद्यार्थी ओसार्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती
फेसबुकमा ‘स्टाटस’ लेखेर हिँडेका विद्यार्थी नेताको सडक दुर्घटनामा निधन
१२ किलो तौल भएका ६३ वर्षीय शिक्षक सम्मानित
अब विद्यालय तहमै क्यान्सर शिक्षा